Weerarada Taliban oo ku soo kordhay caasimadda Afghanistan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Weerarada Taliban oo ku soo kordhay caasimadda Afghanistan
Weerarada Kooxda Talibaan ay ka geysato caasimada Afghanistan ee Kabul ayaa sii kordheysa, iyada oo ay sii bateen dilalka qorsheysan ee lala beegsanayo saraakiisha dowlada, hogaamiyaasha bulshada rayidka ah iyo saxafiyiinta, sida ay soo saartay warbixin hay’ad Mareykan ah.
Warbixinta Kormeerka Gaarka ah ee Dib-u-dhiska Afghanistan, oo loo yaqaan SIGAR ayaa imaaneysa iyada oo maamulka Biden uu qorsheynayo in uu il gaara ku hayo heshiiskii nabadeed ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Taalibaan ee ay kala saxiixdeen bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay.
“Weerarada ka socda Kabul waxay ka badnaayeen weeraradii rubuc sanadkii ka hor,” ayaa lagu yiri warbixinta oo ay soo xiganaysa ciidamada Mareykanka ah oo ku sugan Afghanistan.
Daalibaan ayaa fulisay mowjado weeraro ah oo ka dhacay Afghanistan bishii Diseembar, oo ay ku jiraan weeraradii ka dhacay waqooyiga Baghlan iyo koonfurta gobolada Uruzgan, muddo labo maalmood ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga Afghanistan.
Magaalada Kabul, qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa haleelay gaari, waxaana ku dhaawacmay labo ruux oo uu kujiray qareen.
Howlgalka NATO ay hogaamineyso ee Afghanistan, ayaa lagu soo warramay in 2,586 qof oo rayid ah wax ku noqdeen laga soo bilaabo 1-dii Oktoobar ilaa 31-kii Diseembar ee sanadkii hore, oo ay ku jiraan 810 la dilay iyo 1,776 oo dhaawac ah.
Warbixinta ayaa sheegtay in saamiga qasaaraha ee ka dhashay aaladaha qarxa ee macmalka ah uu kordhay ku dhowaad 17% sanadkaan, taasi oo laxiriirta kororka “bambooyinka dhejis ah”, ayaa lagu yiri warbixint, waxayna qayb ka tahay weerarada mahlignimada ah ee Dalkaasi.
In kasta oo ay jiraan rabshado socda, haddana khasaaraha ka dhacay guud ahaan Afgaanistaan 3-dii Bilood ee ugu dambeeyay Sanadkii tagay ee 2020-kii ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 14, marka la barbar dhigo rubucii hore.
Mareykanku wuxuu ahaa Mid si dhow ula socday dowlada Afghanistan tan iyo markii ay kusoo duuleen wadanka waxyar kadib September 11, 2001-dii, iyada oo uu Mareykanka ku qarash gareeyay ku dhowaad $ 4bilyan sanadkii waliba, si uu u caawiyo ciidamada amniga Afghanistan.
Musuqmaasuqa ayaa aad ugu baahay wasaaradaha dowlada Afghanistan, taasi oo horseedaysa kala fogaansho u dhexeeya dowlada iyo inta badan shacabka, jahwareerka deeq bixiyaasha caalamiga ah, waxayna qeyb ka qaadaneysaa heerka saboolnimada ee wadanka in ka badan 72%, sida uu sheegay Bangiga Aduunka.
Sidoo kale, warbixinnadii ugu dambeeyay ee hay’adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegay in, in ka badan kala bar dadka reer Afghanistan ay aad ugu baahan yihiin gargaar si ay ugu nagaadaan Wadankooda Sanadkaan 2021-ka.
Dhamaadka sanadka 2020-kii, heerka shaqo la’aanta Afghanistan oo la saadaalinayay ayaa lagu sheegay in uu u ku kacayay 37.9% , halka uu ka ahaa boqolkiiba 23.9% sanadka 2019-kii.
Wakiillada Taalibaan iyo dowladda Afqaanistaan horaantii bishii aanu kasoo gudubnay ayaa dib u bilaabay wadahadallado nabadeed oo ka socday Qatar, halkaasi oo kooxdaan hubaysan ay xafiis ku leedahay.
Wadahadalada ayaa looga gol layahaay in lagu soo afjaro colaado tobanaanka sano socday, laakiin jahwareerka iyo cabsida ayaa ku soo korortay kooxda, markii dhaleeceyno kasoo food saareen wadama badan oo caalamka.
Aqalka Cad ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Joe Biden, Jake Sullivan, uu dhigiisa Afghanistan ugu sheegay qadka taleefanka usbuucii la soo dhaafay in maamulka cusub uu “dib u eegi doono” heshiiska dhexmaray Mareykanka iyo Taliban.
Afhayeenka Pentagon-ka John Kirby ayaa sheegay usbuucii la soo dhaafay in Mareykanku uu ku garab taagan yahay Afghanistaan, wax walba oo karaan kooda ah, iyo in ay ka go’an tahay heshiis buuxda oo lala kooxd, laakiin heshiiska ayaa sidoo kale ku baaqaya in Taliban ay xiriirka u jarto Al-Qaacida ayna yareyso rabshadaha.
Milatariga Mareykanka ayaa horaantii bishii hore sheegay in ay gaareen hadafkoodii ahaa in la dhimo tirada ciidamada ka jooga Afghanistan oo laga dhigo ilaa 2,500 oo askari.
Taliyeyaasha sar sare ee Mareykanka ayaa shaki ka qaba dadaalka ay sheegtay Taalibaan ee ku aadan nabada, kadib markii ay si ka shifan u sheegteen in awood ka kaaga badanyihiin Ciidamada Dowlada Afghanista.
Xogta ku jirta warbixinta ayaa intaa ku dartay in hoos loo dhigay Awoodda loo oggol yahay ee ciidamada difaaca Afgaanistaan 208,000 oo shaqaale ah, halka markii hore ahayd qiyaastii 227,000.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Afghanistan ayaa sameeyay tiradii ugu badneyd ee howlgalada dhulka saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2020.
Ugu dambayn kooxda la socodka howl galada Afghanistaan ayaa sheegay in Hawlgallada dhulka ay dhowaad laban laabmeen, taasi oo muujineysa koror 4-boqolkiiba marka lailood barbar dhigo 3-dii bilood ee hore.
Previous articleDagaalameyaal ka tirsan Al-shabaab oo xalay madaafiic ku garaacay magaalada Dhuusamareeb
Next articleGuddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee RAD ee dalka Jabuuti oo farriin u diray madaxweyne Geelle
Golaha Wakiillada ee ismaamul goboleedka Garissa ayaa maanta cod dhammeystiran ku ansixiyay hindise sharciyeedka aftida qaran loogu raadinayo in isbaddal lagu sameeyo dastuurka Kenya. Afhayeenka...